Ubuhlobo beDrive Revenue Revenue Webinar Series | Martech Zone
Ubuhlobo beDrive Revenue Webinar Series
NgoLwesithathu, Juni 27, 2012 NgeCawa, ngoMatshi 24, 2013 UJenn Lisak Golding
Ngexesha lenyanga kaJuni, abahlobo bam kunye nabaxhasi, kwi-Right On Interactive kunye neTinderBox, bajoyina imikhosi yokudala umnandi Uthotho lwewebhu malunga nendlela ubudlelwane obuqhuba ngayo ingeniso. Ekunene kwi-Interactive, umxhasi we Martech Zone, ibonelela nge isisombululo sokuthengisa esizenzekelayo kugxilwe ekuphumeleleni, ekugcineni, nakubudlelwane obukhulayo. I-TinderBox yi-SaaS Isoftware yokuthengisa isoftware Oko kwenza ukuba kube lula ukwenza imultimedia, izindululo zentengiso ezihambelanayo kumathuba akho. Zombini zinokuqonda okumangalisayo kushishino lokuthengisa kunye nentengiso, abathe babelana ngazo kolu ngcelele lwewebhu.
Olu luchungechunge lwecandelo le-3, kugxilwe kwiindawo ezahlukeneyo zentengiso kunye nemijikelezo yokuthengisa kwimizuzu engama-30 yewebhu nganye. Nazi ezinye iindlela eziphambili zokuthatha iseshoni nganye, kodwa ngokuqinisekileyo kuya kufuneka mamela uchungechunge ukufunda ngakumbi! Unokulandela incoko kwi-Twitter kunye #YesItShirt hashtag.
Icandelo 1: Ukupeyinta umfanekiso wethemba lakho
Nazi iingxoxo ezithile kunye nokuthathwa kule webinar:
Ngubani ofanele ukuchitha ixesha lakho uthetha naye
"Ukwamkelwa kwetekhnoloji yokuthengisa esizisebenzelayo kulindeleke ukuba inyuke ngama-50% ngowama-2015." (Izigqibo zikaSirius)
"Iipesenti ezingama-50 zokukhokela abakulungeleyo ukuthenga kwangoko." (Gleanster)
Shift kwinkampani ikuxelela ukuba yintoni ingxaki yakho ekukuncedeni ukusombulula iingxaki ozifumeneyo
Ukufumana phambili kokufumana ngakumbi malunga nethemba
Umgangatho ngaphezu kobungakanani (ukhokelela)
Ukudala unxibelelwano olufanelekileyo, olufanelekileyo
Ukwamkela yonke imithombo yokukhokelela kuguquko olungakumbi
Iingcebiso malunga nokuba ungaqala njani (iinjongo, iiprofayili zabathengi, isikhokelo seshishini)
Mamela iCandelo 1 apha.
Icandelo 2: Inqaku libalisa ibali
Ukuthetha ngokulungelelanisa ukuthengisa kunye neenjongo zokuthengisa
Qinisekisa ukuba i-handoff igudile kwaye isebenza kakuhle kwaye iyasebenza
"I-47% yabathengisi be-B2b bathi bavale ngaphantsi kwe-4% yazo zonke iindlela zokuthengisa ezenziweyo, okanye abayazi le metric." (Uphando lweForrester)
"Abantu bangama-12% amathuba okuba bathenge kuwe xa unokudala unxibelelwano lweemvakalelo." (Uvoto lukaGallup)
"Ngo-2020, abathengi baya kulawula i-85% yobudlelwane babo ngaphandle kokuthetha nomntu." (Uphando lweGartner)
Sebenzisa amanqaku ukuze uchonge kwaye ufaneleke ngaphakathi
Amanqaku kufuneka ahambelane neentlobo ezahlukeneyo zobudlelwane
Zonke izigaba kufuneka ziphathwe ngokwahlukileyo
Amanani anika ukuqonda kulo lonke ibali-umjikelo wobomi wobudlelwane
Mamela kwiCandelo 2 apha.
Inxalenye 3: Masibe Personal
"Abathengi be-B2B baninzi kangange-70% ngenkqubo yokuthenga ngaphambi kokunxibelelana nomthengisi." (Izigqibo zikaSirius)
Ukulungelelanisa izixhobo kunye nobudlelwane
Ukuthetha nge-handoff engenamthungo kwintengiso ukuya kwintengiso
Intlonipho, ukubaluleka, ukuphendula
Ukutsala, ukukhulisa, ukuguqula (intengiso / intengiso yefaneli kunye nendlela abatshintsha ngayo)
Amava aphawulwe ngokupheleleyo kubathengi
Sebenzisa itekhnoloji yokuqhagamshela kuzwelonke nakwangaphakathi
Idatha iqhuba ukuguqulwa
Idili zisondele ngenxa yobudlelwane
Ixesha lokufumana ubuqu lithatha iipesenti ezingama-70 zendlela kwinkqubo
Mamela kwiCandelo 3 apha.
Thatha ixesha umamele le nto imnandi ngokwenyani Uthotho lwewebhu - awuyi kuzisola!
tags: uqhagamshelwanourhweboUkuthengisa iWebinarubudlelwaneIngenisoekunene kunxibelelwanoUkunika amandla ukuthengisaIbhokisi yetinder
Iindlela ezili-10 zeNtengiso eziShukumayo
IFomstack: Indawo yokuGcina abaXhasi yeArhente yakho
Juni 27, 2012 ngo-11: 41 PM
Nantoni na eya kundinceda ndifunde entsha
izinto zamkelekile kakhulu. Ndivuya kakhulu
ukuba wabelane ngolu lwazi. I
ngokuqinisekileyo uya kuyijonga. Enkosi nge
Juni 29, 2012 ngo-9: 50 PM
KwaSukritInfotech, siyaqinisekisa ukuba iinjongo zakho zobukho bewebhu zisonjululwa ngokupheleleyo ngeenkonzo zethu zomjikelo opheleleyo. Iinkonzo zethu zibalulekile kodwa azikhawulelwanga kuphuhliso lwesoftware, izisombululo zeshishini esekwe kwiwebhu, usetyenziso lwewebhu, kunye neNkampani yoPhuhliso lweWebhu. Ngeenkqubo ze-client-centric full-cycle kunye namava e-rock-solid domain, abasebenzi bethu abanetalente nabaqeqeshiweyo bahambisa yonke iprojekthi ngexesha nangona ubukhulu kunye nobunzima.